Vaovao - Fampahalalana sy ny fampiasana vovobony redispersible
Ny vovony afangaro ny sôkôlà redispersible dia fanaparitahana vovoka vita amin'ny fanodinana polymer polimera amin'ny alàlan'ny fanamafana amin'ny baomba. Manana fanaparitahana tsara izy ary azo averina emulsifaly ho lasa emulsion polimer azo antoka aorian'ny fampidirana rano. Ny fampisehoana dia mitovy amin'ny emulsion voalohany. Noho izany, nanjary azo atao ny mamokatra rihitra maina mifangaro kalitao avo lenta, amin'izany fanatsarana ny fananan'ny rihitra.
Ny vovony latinina redispersible dia famenon-doha tena ilaina sy manan-danja ho an'ny rihitra. Afaka manatsara ny fampandehanana ny razana, ny fampitomboana ny tanjaky ny razana, ny fanatsarana ny tanjaky ny fehin-tany amin'ny fantsona maro isan-karazany, ary fanatsarana ny fihenjanana sy ny fanoloran-kery ny fanoherana ny herinaratra, ny herin'ny compressive, ny herin'ny flexible, ny fanoherana ny abrasion, ny fahatsapana, ny adhesion ary ny fahaizan'ny rano. , Asa miasa. Ankoatr'izay, ny vovony latinina miaraka amin'ny fananana hydrophobic dia afaka manamboatra tanteraka ny feta.
Ny sary 1 dia sarin'ny vovobony latinina azo zahana.
Ny vovo-dronono vita amin'ny laonika ho an'ny laonin'ny masonry sy ny feta fanosotra dia misy tsy fetezana tsara, fitazonana rano ary fanoherana ny hatsiaka, ary tanjaka avo mifatotra, izay afaka mamaha amin'ny fomba mivaingana ny kalitaon'ny vaky sy ny fidirana ao amin'ny morton masonry nentin-drazana. olana.
Ny fivoaran'ny tena-tany sy ny fitaovana vita amin'ny vovobony vita amin'ny ranom-boasary redispersible vita amin'ny latabatra dia manana tanjaka avo, tsara cohesion / adhesion ary ilaina fanamorana. Afaka manatsara ny adhesion, ny fanoherana ny abrasion ary ny fitazonana ny rano amin'ireo fitaovana. Izy io dia afaka mitondra rheolojika, mahay miasa ary fampandehanana tsara indrindra amin'ny fanaovana fako sy fandrefesana ny gorodona.
Ny fantsom-bolo vita amin'ny kodiarana, ny mpiara-miasa amin'ny fantsom-bolo mifangaro ny vovoka vita amin'ny alàlan'ny vovobony vita amin'ny rano dia manana adhesion tsara, fihazonana rano tsara, fotoana malalaka misokatra, fanakorontanana, fanoherana ny sakany ary fanoherana tsara ny setroka. Afaka mitondra haingam-pandeha ambony, fanoherana avo ary tsara fikojakojana ny fananganana hametahana pataloha, fametaka tsipika manify sy fisaka miaraka.
Ny rano vita amin'ny vovoka vita amin'ny rano azo avy amin'ny rano dia manatsara ny tanjaky ny fifamatorana amin'ny sangan'asa rehetra, mampihena ny modulus elastika, mampitombo ny fihazonana rano, mampihena ny fidiran'ny rano, ary manome vokatra mora sy mora foana, ny fanoherana ny rano ary fanoherana ny rano ny rano sy ny fanoherana ny rano dia mitaky faharetan'ny maharitra rafitra fanidiana.
Ny rindrina ivelany ivelany famonoana ny famafazana emulion azo alaina amin'ny rafi-pandrefesana ivelany ivelan'ny rindrina dia manatsara ny fifangaroan'ny rihitra sy ny fatorana amin'ny tabilaon'ny menaky ny menaka, mba hahafahanao mikaroka insulation ary mampihena ny fanjifana angovo. Mba hahatratrarana ny fahaiza-miasa ilaina, ny tanjaka sy ny malefaka amin'ny vokatra azo avy amin'ny rindrina insulation amin'ny rindrina ivelany, azonao atao ny manao ny vokatra mortar-nao manana fampisehoana miraikitra tsara miaraka amina andian-insulation material sy ny base. Mandritra izany fotoana izany dia manampy amin'ny fanatsarana ny fanoherana ny fiatraikany sy ny fanoherana ny triatra ambonin'ny tany izany.
Ny sary 2 dia ny sarin'ny vovoka latex azo averina.
Ny vovo-dronono vita amin'ny laoniny Mortar Redispersible dia manana ny fitoviana, ny fihenam-bidy, ny firaiketam-po avo, ny tanjaka azo ampiasaina ary ny tanjaka. Ataovy mifanaraka amin'ny fepetra takiana etsy ambony ny fanamboarana mortar fanamboarana ny simenitra tsy miorina amin'ny rafitra.
Ny vovo-dronono vita amin'ny laoniny azo ampiasaina amin'ny laoniny dia ampiasaina indrindra hitsaboana ny tampon'ny beton, simenitra misy rivotra, biriky sokay ary biriky lavenona. Ny fikapohana, ny fikomiana, ny sisa dia mahatonga ny fahatokisana ho mafy orina, tsy mora ny mianjera ary ny fanoherana ny rano, ary ny fanoherana ny setroka tsara indrindra. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fampandehanana tsotra, fananganana mora.
Ny vokatra vovoka azo zahana dia be eny an-tsena, saingy ny fananany dia mitovy. Azo fintina fohifohy toy izao manaraka izao izy ireo:
Ity karazana vokatra ity dia ampiasaina amin'ny sehatry ny fananganana toa ny insulation rindrina ivelany, fatorana taila, fitsaboana amin'ny endriny, plastika mifamatotra, plastika stucco, fananganana rindrina anatiny sy ivelany, fanosotra haingon-trano, sns. Manana rindrambaiko isan-karazany sy tsara izy io. fanantenana amin'ny tsena.